रमेश राज बास्तोला print
पोर्चुगलको भित्री गणितीय तथ्याड्कहरु मलाई खासै केही थाहा छैन। ३ वर्षे वसाईमा सुरुका वर्षहरुमा मलाई पनि पोर्चुगल युरोपीयन देस होईन कि यो त भारतको विहार पो हो कि जस्तो लाग्दथ्यो। यसको कारण थियो। म टाढा जान सक्दिनथे। पोर्चुगीस भाषा बुझ्दिनथे। म वस्ने वरिपरी नेपाली, वंगाली, पाकिस्तानी, इन्डीयन र नेपालीहरुको बाक्लो वस्ती थियो, भेटघाट पनि म जस्तै भर्खरै आएका साथीभाईहरु मात्र हुन्थ्यो।
सबैसंग समस्या नै समस्या थियो, न भाषा छ न कुनै सिप। हामी कुनै सिप सिक्न भाषा पढ्नभन्दा पनि कसरी कार्ड बनाउने ध्यानमा थियौ। मासिक तलव ६०० युरो दिने पोर्चुगीजकोमा भन्दा तुरुन्त जागीरको नियुक्ति पत्र दिने, नेपाली वंगाली भारतीयको पसल,रेष्टुरेन्टमा १ सय ५० युरो मासिकमा काम गर्न आफै राज़ी हुने गर्दथ्यौ किन कि हामीलाई हरेक कुरा चांडै चाहीएको थियो। चाडै कार्ड बन्यो भने परिवारसँग भेट हुने लोभ।
यही चाडो चाहीने संस्कारलाई हामी नेपालीको बानी नेपालीले नै बुझेका हुन्छन्। केही नेपालीले राम्रोसँग यहि मौका छोप्दै चाडै कार्ड बन्दछ भन्ने आशा देखाएर १ महीना १५ दिनमा वन्ने सोसीयल नं लाई ७ देखि ८ सय युरो असुल्दै वनाऊने हाम्रै नेपाली हुन्। यहाँ कतिपय साथीहरुले कालो लिस्टमा परेको कम्पनीमा काम गर्नु हुन्छ अनि सोसीयल आएन ४/५ महीना भयो सोसीयल वन्द भयो भन्नु हुन्छ।
वास्तवमा जहाँ काम सुरु गरिन्छ त्यहिबाट नै सोसीयल नं. बन्छ। तर पुराना नेपालीले अनुचित आर्थीक लाभ लिनको लागी पहिले सोसीयल नं बनाएर आउ अनि मात्र काम दिन्छौ भनेर अफ्टेरोमा पार्ने गर्दछन।
यतीसम्म कि खेति कम्पनीका मालिकहरुले खेतीमा काम गर्नेहरुको त एकै लटमा ६० जनासँग ३ /४ सय युरो लिएर सोसीयल नं.सोहि खेति कम्पनीको नामबाट वनायको पनि धेरै लाई जानकारी छ।
दुइ चार सय युरोको लोभमा नचलेका र नबिकेका पसलहरु नेपालीले नेपालीलाई नै वेच्न दलाली गर्ने नेपालीले नेपाली कै आर्थीक हिनामीना गराईदीने अनि केही नेपालीले गलत गरेका गलत कार्यमा चुपचाप वस्ने अनि यो दोष सवै पोर्चुगललाई दिने अनि पोर्चुगल ख़तम छ भन्ने म जस्ता धेरै हुन्छन् सुरु- सुरुमा।
अझ नेपालीका कति खेती कम्पनी, कति नेपालीहरु चाइनीज़ पसल जो कालों सुचीमा परेका छन् त्यहाँ काम गरेको कार्ड वनाऊनेको १३ महीना होईन १७/१७ महीना सम्म पनि कार्ड नआएको गुनासो मैले पनि नसुनेको होईन। अर्कोतिर राम्रो र यहाको नियम कानुनमा चलेको र यो देश को कानुन वमोजीम कर तिरेको कम्पनीबाट अहीले पनि कार्ड आईराखेको अनि सोसीयल बनेको आफ्नै आँखाले देखेको पनि छु।
हामी आफै यस्तो भ्रम सिर्जना गर्दछौ कि भिषाको क्याटगोरी छुट्याऊदछौ र मनगढन्ते शैलीमा डि भिषा ले पाउदैन। सि भिषाले पाउछ, यस्तोले पाउदैन उस्तोले पाउछ भनेर समाचार नै बनाईदिन्छौ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नियम-कानुन पोर्चुगलमा नभएको होईन, नियम-कानुन भएर नै यहा हामीलाई गार्हो लागेको हो। नेपालमा जस्तो मनपरितन्त्रमा हुर्किएका हामी यहा आयौं। सबैलाई जानकारी होस् पोर्चुगल कानुनी राज्य भएको देश हो यसमा २ मत छैन। कानुन नभएको भए खेति कम्पनिका मालिक नविन गिरी, यहाँको पुर्व -प्रधान मन्त्री सुकरात लगायत जेलमा जादैंनथे होला। पोर्चुगलमा कानुनी राज्यको अनुभूति छ अर्थात् नियम - कानुन छ।
धेरै साथीहरुले पोर्चुगल युरोप जसतो छैन भन्छन। हामी आन्जुस इन्तेन्द्ते (लिस्बन ) वंगाली बजार, मार्टेमुनीजका भित्री गल्लीमा हिड्दछौ पुरातात्विक हिसाबले त्यहाँ ति घरहरु पोर्चुगिस सरकारले नै भत्काउन दिदैन। अनि हामीले सोच्दछौ कि पोर्चुगल युरोप होईन कि। हामी नेपालीले नै एक अपार्टमेन्ट लिन्छौ र वाध्यता या पैसा बचाउनकै लागी ८/१० जना बस्दछौ अनि भन्छौ पोर्चुगल यूरोप जस्तो छैन।
अन्य युरोपीयन देशमा गर्भवती भएको ४/५ महीना भएका महीलालाई सजीलै तपाई जुन देशको नागरिक हो त्यहि देशमा जान सक्नुहुन्छ भन्ने गरिन्छ। तर तिनै युरोपियन देशहरुबाट पोर्चुगल आएकाहरुलाई पोर्चुगिस सरकारले फिनान्स र सोसीयलको आधारमा अस्पतालमा सम्पुर्ण व्यवस्था
नि: शुल्क गर्छ।
त्यतिमात्र होईन बच्चाको स्वास्थमा पुर्ण ख़्याल राखेको हुन्छ, सायद अन्य युरोपीयन मुलुकहरु डेनमार्क, नर्वे,वेलायत, जर्मनमा भिषा नभएकाहरुलाई यस्तो सुविधा पक्कै पनि दिदैन। बच्चाको जन्म भएपछि बच्चाको आधारमा आमा-बुवालाई समेत कार्ड दिने राष्ट्र हो पोर्चुगल। आज भन्दा ९ वर्ष अगाडी अस्ट्रीयामा बच्चा पाएर वसेकी नेपाली चेलीलाई नेपाल जान भनेर पटक पटक अस्ट्रियन सरकारले पत्र दिदा उहाँले अस्ट्रियालाई र त्यहाँको नियमलाई के भन्छिन होला।
जर्मन,डेनमार्क, साईप्रसमा घरायसी काम अउपेयर गर्नेको तलब यती न्युन छ तर काम भने हप्ता को ६ दिन १२ घण्टाका दरले गर्नु पर्छ। तर पोर्चुगलमा घरमा काम गर्ने दिदि-वहीनीहरुको तलव- सुविधा कम्तीमा पनि ५ सय ५६ युरो हुन्छ। घरायशी काम गरेरै पनि पनि कार्ड वनाउन सकिने देश हो पोर्चुगल जुन साईप्रस, जर्मनी, डेनमार्क जस्ता मुलुकमा यस्तो सुविधा छैन।
चर्चित हास्य-टेली शृंखलाका 'ल्याङ्ग्रे दादा' यहाँ काम गरेर महीनाको तलब यहाको सरकारी नियम भन्दा केही बढीनै पाएका थिए। यहाँ भन्दा नेपाल राम्रो छ मेरो लागी भनेर नेपाल फर्किय। र फर्किने वेला भने 'पोर्चुगल खराव देश र छ।'
नेपालीले नेपालीमाथि अन्याय-अत्याचार गर्यो भने त्यसलाइ गुपचुप सहन्छौ यहि सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो। पोर्चुगलमा नयाँ आउने हरेक नेपालीहरुले दुखको श्रृखला दोहोर्याउनु पर्छ। अनि हामी भन्छौ पोर्चुगिस सरकार खराव। पोर्चुगल खराव। ढिलो चाडो पेपर बनाइदिएको छ सरकारले। युके, डेनमार्क, जर्मनी, पोल्याण्ड, नर्बे, फिनल्याण्ड आदि मुलुकहरुबाट आएकाहरु र टर्कीबाट डुंगामा ज्यानको बाजी लाउँदै पोर्चुगल आएकाहरु तथा रसिया र अफ्रिकन मुलुकबाट पोर्चुगल पुगेकाहरु सबैले पोर्चुगलको अस्थायी बसोबास अनुमति अर्थात् एक वर्षभित्रै बनाएकै छन।
हामी नेपालीहरु भालेपार्क लिस्बनमा नेपालीहरुको जमघट हुने थलोलाइ हेरेर मात्र हेरेर निराश नबनौ! यही पोर्चुगलमा १५ सय देखी २ हजार तलव खाने नेपाली पनि नभएका होईनन्। दर्जनौ नेपालीलाई काम लगाईदीने र पोर्चुगिस रेष्टुरेन्टको ब्यबस्थापक भएर काम गरिरहेका अन्जन शर्माहरु पनि नभएका होईनन्। यही पोर्चुगलमा र मासीक ५ सय युरो नेपालबाट मगाएर गुजारा गर्ने नेपाली पनि छन्।
यहाँ रेस्टुरेन्ट ब्यब्सायका नामी हस्ती टंक सापकोटा, रमेस गुरुङ लक्ष्मी सापकोटा पनि छन्। ब्यापार व्यवसायमा जमेका सागर लामीछाने, दौलत शर्मा, कुवेर कार्की, रुद्र सुवेदीहरु पनि यही पोर्चुगलमा छन्।
ब्यबसायबाटै मासीक ३ हजार युरो देखी ३० हजार युरो सम्म नाफा गर्ने नेपाली नभएका होईनन् पोर्चुगलमा। त्यसैले मिहेनत गरौँ। भाषा पढौं, सबैभन्दा ठुलो कुरा धैर्य गरौँ। गलत गर्नेलाई गलत भनौं राम्रो गर्नेलाई राम्रो गर्यो है भनेर भन्ने गरौँ। पोर्चगलमा पुगेर हामीले पिआर बनाएका छौँ तै पनि पोर्चुगल खराव भन्न छाडेका छैन। असल भन्न नसक्ने ब्यवहारलाइ त्यागौँ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ६, २०७३ ०३:१९:५२